Mark Lawrenson oo Saadaal ka bixiyay kulamada Todobaadkan ee Premier League, iyo Kooxaha Badinaya | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Ciyaaraha Mark Lawrenson oo Saadaal ka bixiyay kulamada Todobaadkan ee Premier League, iyo...
Mark Lawrenson oo Saadaal ka bixiyay kulamada Todobaadkan ee Premier League, iyo Kooxaha Badinaya
Horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League ayaa gelaya toddobaadkii shanaad ee xilli ciyaareedkan cusub ee 2021-22, waxaana uu kusoo beegmayaa xilli lasoo ciyaaray tartamada Champions League iyo Europa League oo natiijooyin kala duwan ay kasoo hooyeen kooxuhu.
Kulanka ugu adag toddobaadkan waxa ku ballansan labada kooxood ee reer London ee Chelsea iyo Tottenham, waxaana natiijada kasoo baxda ciyaartani ay noqon doontaa mid saamayn ku yeelata sida uu u yaallo miiska kala-sarraynta horyaalka ee hadda.
Tottenham oo hoggaanka horyaalka labaga tuuray toddobaadkan horraantiisii ayaa waxay martigelin doontaa Chelsea oo figta sare ay wada fadhiyaan Manchester United iyo Liverpool oo dhibcaha iyo goolashaba ay ka siman yihiin.
Khabiirka ciyaaraha Mark Lawrenson oo kulamadan saadaaliyey ayaa kooxna ka farxiyey midda kalena niyad-jab kusii riday.
‘Waxa aan odhan karaa Chelsea ayaa ah kooxda ugu wanaagsan ee aan kusoo aragnay Premier League xilli ciyaareedkan illaa hadda.” Sidaas waxa yidhi Mark Lawrenson ka hor inta aanu shaacin saadaashiisa kulada. Waxa uu ku daray: “Kaliya ma aha kulamada ay ciyaareen ee ay guuleysteen laakiin sidoo kale qaabka ay ku heleen guusha. Anigu wali ma hubo in kooxaha kale ay leeyihiin fursado horyaalka ah oo sidaas oo kale ah.”
Khabiirka ayaa intaas kaddib u galay saadaashiisa kulamada toddobaadka oo dhacaya Jimcaha, Sabtida iyo Axadda maadaama usbuuc-dhamaadka la ciyaari doono tartanka EFL Cup (Carabao Cup), waxaana uu Thomas Tuchel iyo xiddigihiisa ugu bushaareeyey guul ay kala soo laabanayaan Tottenham Hotspur Stadium, waxaana sidaas oo kale ah Liverpool oo uu xusay inay guushii saddexaad heli doonto.
Laakiin Arsenal ayaa natiijo niyad-jab ah heli doonta kaddib afar ciyaarood oo saddex laga badiyey midda kalena ay badiyeen, waxaana Burnley oo ay u tegayaan ay kala soo kulmi doonaan natiijo barbarro ah, taas oo sii xumayn karta xaaladda ay ku jiraan.
Manchester United ayaa si dirqi ah kaga baxsan doonta West Ham United oo ay ugu tegayso London, halka Man City ay xasuuq diiwaanka gashan doonto, isla markaana noqon doonto kooxda goolasha ugu badan ka dhalisay horyaalka marka ay Sabtida qaabbisho Southampton.
Wolves 2-0 Brenford
Previous articleDeg Deg Rooble oo damacsan Go’aano kale oo Halis ku ah Farmaajo 17/09/2021
Next articleDuulimaadkii Turkish Airline oo baaqday iyo ciidan badan oo lagu arkay garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde